Ukuqalisa kwakhona ukhenketho lwesixeko saseYurophu ngoku isenzo esinzima ukulinganisa iimfuno zabemi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » Ukuqalisa kwakhona ukhenketho lwesixeko saseYurophu ngoku isenzo esinzima ukulinganisa iimfuno zabemi
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba zeCzechia Breaking • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Shopping • ISpain Iindaba Eziphambili • News Sustainability • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukuqalisa kwakhona ukhenketho lwesixeko saseYurophu ngoku isenzo esinzima ukulinganisa iimfuno zabemi.
Njengoko izixeko zaseYurophu ezidumileyo ziphinda zivulwa ngokupheleleyo kubakhenkethi bamazwe ngamazwe, amagosa ezokhenketho kufuneka asebenzise eli xesha lokukhula ngokutsha ukuze afumane ulungelelwano phakathi kwengeniso yezoqoqosho nokuqinisekisa umgangatho wobomi obulungileyo kubahlali.
Ubhubhani wehlabathi jikelele we-COVID-19 ube nempembelelo enkulu kukhenketho lokuqhekeka kwedolophu yaseYurophu.
Abantu baseYurophu baqala ukubuyela kwizixeko ezikhulu kulo lonke elaseYurophu ngokuzithemba ukutyholwa kabini.
Phambi kobhubhani we-COVID-19, ukonyuka okuthe rhoqo kukhenketho lwamazwe ngamazwe ukuya kwizixeko ezinjengeBarcelona, ​​​​iAmsterdam kunye nePrague kubangele umsindo phakathi koluntu lwasekhaya.
Ukusukela oko kwathi kwavela abathwali beendleko eziphantsi kunye neendlela zohlahlo lwabiwo-mali lwendawo yokuhlala, ukuthandwa kokhenketho lwekhefu edolophini kuye kwanda kakhulu phakathi kohambo lwangaphakathi kwilizwekazi lonke elaseYurophu. Ngokwabahlalutyi boshishino, i-38% yabaphenduli bathe bathatha olu hlobo lohambo, belwenza indawo yesithathu edume kwihlabathi jikelele, emva kwelanga nokhenketho lolwandle kunye nokundwendwela abahlobo nezalamane (VFR).
Phambi kobhubhani we-COVID-19, unyaka nonyaka (YoY) uyonyuka kukhenketho lwamazwe ngamazwe ukuya kwizixeko ezifana Barcelona, Amsterdam kunye nePrague yabangela umsindo phakathi kwabahlali basekuhlaleni, ibangela uxinzelelo koorhulumente basekuhlaleni.
Nangona ubhubhani ubenempembelelo enkulu kukhenketho lwekhefu edolophini, abakhenkethi bejonge ukunqanda iindawo ezixineneyo kwiindawo ezinkulu zika-2020 no-2021, abantu baseYurophu baqala ukubuyela kwizixeko ezikhulu kulo lonke elaseYurophu ngokuzithemba ukubethelwa kabini kunye nezithintelo ziba zincinci. gwenxa.
Njengoko izixeko zaseYurophu ezidumileyo ziphinda zivulwa ngokupheleleyo kubakhenkethi bamazwe ngamazwe, amagosa ezokhenketho kufuneka asebenzise eli xesha lokukhula ngokutsha ukuze afumane ulungelelwano phakathi kwengeniso yezoqoqosho nokuqinisekisa umgangatho wobomi obulungileyo kubahlali. Umzekelo, ukuvulwa kwakhona kwe Prague kukhenketho lwamazwe ngamazwe kuya kuba nomdla ukujonga.
Phakathi kwesi sifo, amagosa okhenketho angena Prague bachaze injongo yabo yokusebenzisa eli xesha lokuphumla ukudala iindlela ezizinzileyo zokhenketho lwesixeko kwixesha elizayo, oluya kukholisa abahlali. Phambi kobhubhane, isixeko besinemiba ngabakhenkethi abangxolayo bevala umbindi wesixeko kwaye behlisa umgangatho wobomi kubemi balapha. PragueUgqaliselo olutsha olubangelwa ngubhubhane lwachazwa njengokutsala 'ixabiso eliphezulu' abakhenkethi abanokuhlala ixesha elide, bachithe ngaphezulu, kwaye ngokubanzi benze ngendlela enoxanduva ngakumbi ngexesha lohambo lwabo.
Lo mnqweno ovela kumagosa ezokhenketho ePrague ukuba aphinde abuyele kwakhona ngamaphulo entengiso kwaye aqhubele phambili kwiziqendu ezinokuthi zibekho zommiselo unokuphila nje ixesha elifutshane njengoko ifuthe loqoqosho lobhubhane liqhubeka. Njengoko ukhenketho olungena ngaphakathi kwiRiphabhliki yaseCzech luseluqhezwana lwamanqanaba angaphambi kobhubhane, iManyano yezoKhenketho yaseCzech icele abasemagunyeni ePrague ukuba bathathe amanyathelo ngokukhawuleza ukunqanda imeko yezoqoqosho.
Ngenkxaso yezemali enxulumene ne-COVID ephela ngoku kumashishini amaninzi anxulumene nokhenketho kulo lonke elaseYurophu, izixeko ezikhulu zaseYurophu kusenokufuneka ziphinde zigxile kubuninzi obungaphezulu komgangatho ukuvuselela ukuvuseleleka koqoqosho.
Olu tshintsho lunokubakho kwisicwangciso-qhinga lunokubacaphukisa abantu abaninzi basekuhlaleni abangaxhomekekanga kukhenketho ukuze bafumane ingeniso. Nangona kunjalo, kufuneka kuvunywe ukuba uninzi lwabemi balapha bazakukhankasela ukubuyiswa kokhenketho oluninzi ukuze bakwazi ukuphucula iimali zabo. Imbuyekezo epheleleyo yokhenketho lwesixeko kwiminyaka ezayo yenza ukuba amagosa esixeko enze isenzo esinzima sokulinganisa, kwaye siya kuhlala sibangela impikiswano.